बाढीले बगाइ रहेको सानो कुकुरको बच्चालाइ बचाउने महान नानु लाई सबैले फोटो छोएर Good भन्नै पर्छ ! - Mero Tv Online
admin - २०७८, १९ असार शनिबार ०२:५० 0
Home रोचक जानकारी बाढीले बगाइ रहेको सानो कुकुरको बच्चालाइ बचाउने महान नानु लाई सबैले फोटो...
बाढीले बगाइ रहेको सानो कुकुरको बच्चालाइ बचाउने महान नानु लाई सबैले फोटो छोएर Good भन्नै पर्छ !
बाढीको कारणले बगाइ रहेको सानो कुकुरको बच्चालाइ बचाउने महान नानु लाई सबैले दखने बित्तिकै फोटो मा छोएर ,good भन्नै पर्छ !
काठमाडौ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले आफ्ना नागरिकलाई नेपाल सहित १४ देशमा यात्रा नगर्नु भनेको छ। नागरीकलाई १४ मुलुकमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। महामारीको जोखिम अत्याधिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै यूएईले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
यूएईको विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय आपतकालीन, संकट र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले को’रो ना संक्रमणको जोखिमका दृष्टिले आफ्ना नागरिकलाई साउन ६ गतेसम्मका लागि नेपाल, भारत सहित १४ मलुकको यात्रामा रोक लगाएको हो। यूएईले आफ्ना नागरिक लाई यात्रा नगर्न भनेको अन्य देशमा बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भियतनाम, नामिबिया, जाम्बिया, कंगो, युगान्डा, सेरा लियोन, लाइबेरिया, दक्षिण अफ्रिका र नाइजेरिया हुन्।
यि मुलुकमा अहिले महामारी उच्च बिन्दुमा छ । यूएईको विदेश मन्त्रालयले विदेश (अन्य देश) भ्रमण गर्ने आफ्ना नागरिकलाई को’भिड–१९ सम्बन्धी सबै प्रकारका सत’र्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । यूएईको विदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय आपतकालीन, सं’कट र विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले को’रो ना संक्रमणको जोखिम रहेको भन्दै नेपाल, भारतसहित १४ मलुकको यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
भिडियो admin - २०७८, १९ असार शनिबार ०२:५० 0
समाचार admin - २०७८, १९ असार शनिबार ०२:५० 0